Wafdi ka socda dowladda oo gaaray Baled-Xaawo | KEYDMEDIA ONLINE
Wafdi ka socda dowladda oo gaaray Baled-Xaawo
Wafdi ka socda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta safar ugu amba baxay gobalka Gedo oo uu dhawaan ka dhacay dagaal adag oo u dhaxeeya Jubbaland iyo DF.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wafdigaan oo ay kamid yihiin Wasiirada Warfaafinta,Gaashaandhigga iyo Cadaaladda ayaa gaaaray Degmada Doowlow, waxa ayna u sii gudbeen magaalada Baled-Xaawo.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe oo warbaahinta la ahadlay ayaa yiri “Dadkii lahaa Jabhadi majirto kaalaya Baled-Xaawo arka, dadkii lahaa dhib ma dhicin kaalaya Balad-Xaawo arka, dadkii lahaa Faragelin ma jirto kaalaya Balad-Xaawo arka”.
Dubbe wuxuu sheegay in u jeedada uu Waftigani u tagay Gobolka ay tahay inuu soo idhaindheeyo qasaarha jira iyo inta uu la eg yahay dhibka dhacday.
Dowladda uu Farmaajo hoggaamiyo ayaa xasarado siyaasadeed oo kala duwan ka abuureysa dalka oo dhan waxa ayna afuufeysaa dagaalo lagu riiqmo si loo sii kala fogaado.
Baled-Xaawo waxaa dhawaan ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda ee Muqdisho diyaaradaha looga daabulay iyo iyo kuwii Al-Shabaab ka xoreeyay magaaladaas Toban sano ka hor ee Jubballand.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe wuxuu wali halkiisi kasii wadaa marin habaabinta shacabka isagoo dagaal ay Madaxtooyada Soomaaliya hurineyso ku tilmaamaya mid kasoo tallaabsaday Xadka Kenya.